November 6, 2020 - Achawlaymyar
မာနႀကီးတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ နားလည္ဖို႔ခက္တဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား…..
November 6, 2020 by Achawlaymyar
မာနႀကီးတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ နားလည္ဖို႔ခက္တဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား တစ္ခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြက လူပုံၾကည့္ရင္ မာနႀကီး တယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္စိတ္ရင္းက ႏူးညံ တတ္ၾက ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ပုံစံက နည္းနည္း ေအးစက္စက္ ေနတတ္တဲ့ အတြက္ သူတို႔ကို လူေတြက မာနႀကီးတဲ့ သူေတြအျဖစ္ လြယ္လြယ္ သတ္မွ တ္လိုက္တတ္ၾက တာပါ။ တကယ္တမ္း မာနႀကီးတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားေလးေတြက ဒီလို႐ွိလို႔ေနပါတယ္။ (1) အေပါင္းအသင္းေ႐ြးလို႔ သူတို႔ေတြဟာ ေတြ႕ရာလူကို မခင္တတ္ၾက သလို သူတို႔ဆီမွာ သူတို႔တကယ္ခင္တဲ့ အေပါင္းအသင္း အနည္းငယ္ေလာက္သာ ႐ွိပါတယ္။ သူတို႔တကယ္မခင္တဲ့ သူေတြ အေပၚ သိပ္ရင္းႏွီး ဟန္မျပတတ္ၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔ကို မာနႀကီး … Read more
သဲလေးကကိုယ့်ဘဝရဲ့အသက်ပါဆိုပြီးစနိုးကြည်ဖြူအား ကျီစယ်နေတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ ဗီဒီယို
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အချိန်တိုအတွင်း ရရှိလာသူကတော့ အဆိုတော် ဖြိုးမြတ်အောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဂီတလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတွေကိုလည်း အမြဲကြိုးစားရေးသားနေပြီး ပရိသတ်တွေကို အမြဲချပြလေ့ ရှိတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် သူရဲ့ သီချင်းတိုင်းလိုလိုဟာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ အမြဲတိုက်ဆိုင်လေ့ရှိတာကြောင့်လည်း လူကြိုက်များနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ Music Video တစ်ခုမှာ မော်ဒယ် ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကလည်း မော်ဒယ် စနိုးကြည်ဖြူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ဗီဒီယိုလေး တစ်ခု တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သဲလေးကကိုယ့်ဘဝရဲ့အသက်ပါဆိုပြီးစနိုးကြည်ဖြူအား စနောက်ကျီစယ်နေတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ Video လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အနုပညာမောင်နှမနှစ်ယောက်သား ပျော်ပျော်ပါးပါးစနောက်နေကြတာဟာလည်း မြင်ရသူတိုင်းကို အပျော်တွေကူးစက်သွားစေမှာ အသေချာပါပဲနော်။ ပရိသတ်တွေလည်း … Read more
မြန်မာ့အလံကိုကိုင်ဆောင်ပြီး ပြိုင်ဘက်ဆိုင်းရပ်စ်ဝါရှင်တန်ကို ၅ ချီအတွင်း အလဲထိုးသတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဒေ့ဗ်…..
မြန်မာ့အလံကိုကိုင်ဆောင်ပြီး ပြိုင်ဘက်ဆိုင်းရပ်စ်ဝါရှင်တန်ကို ၅ ချီအတွင်း အလဲထိုးသတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဒေ့ဗ် ကနေဒါနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သူ ဒေ့ဗ်က လာမယ့်နိုဝင်ဘာ (၇)ရက်နေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ထိုးသတ်သွားမယ့်ရိုးရာလက်ဝှေ့ စိန်ခေါ်ပွဲမှာတော့ ပြိုင်ဘက်ဆိုင်းရပ်စ်ဝါရှင်တန်ကို(၅) ချီအတွင်း အလဲထိုးသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ကြုံးဝါးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ စိန်ခေါ်ပွဲမှာတော့ ဒေ့ဗ်က မြန်မာနိုင်ငံအလံကို ကိုင်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။Lethwei World Title ဟု အမည်ပေးထားခဲ့တဲ့ အဆိုပါ မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲမှာတော့ အနိုင်ရရှိတဲ့ ကစားသမားအနေနဲ့ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံအဖြစ် အောင်ပွဲခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ယခုစိန်ခေါ်ပွဲကိုလည်း မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့စည်းမျဉ်းအတိုင်းယှဉ်ပြိုင်သွားဖို့ သဘောတူညီထားပြီး အလဲထိုးစနစ်နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ချီလျှင်(၃)မိနစ်စီယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်သလို (၅) ချီအထိထိုးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍(၅)ချီအတွင်း အရှုံးအနိုင်မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက နောက်ထပ်(၂)ချီ ဆက်လက်ထိုးသတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဒေ့ဗ်ကအတည်ပြု ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့စည်းမျဉ်းတွေမှာ အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းနဲ့တိုက်တဲ့နည်းစနစ်ကိုလည်းအသုံးပြုခွင့် ပေးထားတယ်လို့သိရပြီး လက်သီးဗလာဖြင့်ထိုးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် … Read more
နေ့ခင်းကြောင်တောင် ဖြစ်ရဖြစ်ရပလေ မောင်ရင်ရယ်..
ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ေ႐ႊဆိုင္ကေနဆြဲႀကိဳးလုေျပးစဥ္ မွတ္ပုံတင္ျပဳတ္က်က်န္ခဲ့သျဖင့္ နာရီပိုင္းအတြင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ခေလာင္းတန္းစီရင္စု ဖတၳနာကန္းလမ္း ၃၈ တြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Tesco Lotus ကုန္တိုက္အတြင္းရွိေ႐ႊဆိုင္ထဲသို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ၁၁:၀၀ ခ်ိန္ အသက္ ၂၅-၃၀ အ႐ြယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ဦးထုပ္ေဆာင္းထားၿပီး Mask 😷 ဝတ္ဆင္ထားကာ ေ႐ႊဆိုင္ရွိအေရာင္းဝန္ထမ္းထံမွ ၁ ဘတ္သားေ႐ႊဆြဲႀကိဳး ႏွစ္ႀကိဳးအားဝယ္ယူရန္ၾကည့္ရႈ႕အၿပီး႐ုတ္တရက္ထြက္ေျပးသြားခဲ့ ။ ထြက္ေျပးသြားစဥ္ေနာက္မွလိုက္လံဖမ္းဆီးေသာ္လည္း ဆိုင္ကယ္စီးကာလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ၿပီး အနီးအနားတြင္ မွတ္ပုံတင္က်က်န္ခဲ့သျဖင့္ လိပ္စာအရ Lotus ႏွင့္ – မနီးမေဝးလမ္း ၃၅ ထဲမွာေနထိုင္သူျဖစ္တာေၾကာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွအခ်ိန္မွီဖမ္းဆီးရမိခဲ့ကာ ေ႐ႊဆြဲႀကိဳးႏွစ္ကုံးအားျပန္လည္အပ္ႏွင္းခဲ့သည္ဟုသိရ တရားခံသည္ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ႏိုင္ ပထမဖုန္း စုေန႔တ္ ျဖစ္ၿပီး စာေသာက္စရာ Delivery’s ပို႔ေဆာင္တဲ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ကာ လစာေငြျဖင့္မလုံေလာက္သျဖင့္ယခုလိုလုပ္ခဲ့တာဟု … Read more
၂ ပတ္အတြင္း ေငြဝင္ခ်င္တဲ့သူေတြ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္…….
မနက်ဖြန်ကနေ ၂ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေ ကံတက်ချင်တဲ့သူတွေ ထီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေ ဒီယတြာကိုလုပ်ပါ မနက် ၆:၀၀ကနေ၉:၀၀ အတွင်းပြုလုပ်ရန်ယတြာ ကော်ဖီ ၃ခွက်ကို ပူပူနွေးနွေးလေးဖျော်ပြီး မြတ်စွာဘုရားကို ကပ်လှုပါ ဖယောင်းတိုင် ၃တိုင်ပါ မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပေးပါ ဆုတောင်းရမှာပါ ယနေ့မှစပြီး ငွေဝင်ရပါလိုပါတယ် ထီပေါက်စေလိုတယ်ဟု အရှင်ဘုရားဟု ဆုတောင်းပါ တစ်ရက်ပဲလုပ်ရမှာပါ နှစ်ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ် ကံတွေတက်ပြီး အောင်မြင်မှု တိုးတက်မှုတွေရလာပါလိမ့်မယ် 7ရက်သားသမီးတွေ ဒီယတြာကိုတွေ့တော့ လိုက်လုပ်ကျတော့ မိမိလဲကုသိုလ်ရပါတယ် ငွေလဲပိုဝင်ပါတယ် ဆရာတစ်နေ့တစ်ခါ တစ်ပတ်တစ်ခါတင်ပေးတဲ့ ယတြာကို လိုက်လုပ်ကျတဲ့သူတွေအားလုံး 2ပတ်အတွင်း ငွေဝင် ထီပေါက် စီးပွားတကိကျပါစေလို့ဆရာက ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Htoo Myat Aung Zawgyi မနက္ျဖန္ကေန ၂ပတ္အတြင္း ေငြဝင္ခ်င္တဲ့သူေတြ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းခ်င္တဲ့သူေတြ ကံတက္ခ်င္တဲ့သူေတြ ထီခ်ဲေပါက္ခ်င္တဲ့သူေတြ … Read more
သင် လူရွေးမှားနေပြီဟု သိသာစေနိုင်သော အချက်လေးများ….
မျက်မှန်သမားတွေ မျက်မှန် လွတ်ချင်လျှင်…..
ဇီးဖြူသီး ကြိန်မှန်ရွက်+ ကွမ်းရွက်+ပျားရည် မျက်မှန်တပ်ထားရသူများ လက်တွေ့သာ စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်ကြပါ အသက်(၃၀)ကျော်မှပဲ မျက်စိမကြည်။ မှုန်ဝါးဝါးမို့ ဆရာဝန်ပြကြည့်တော့ အနီးကြည့် ပါဝါ (+၁၅၀)ဒီဂရီ မျက်မှန် တပ်ခဲ့ရသည်။ အခုအသက်(၄၀)ကျော်မှ မျက်မှန်လွတ်လေတော့ ထူးဆန်းနေသလို အများကထင်ကြတော့သည်။ ဆေးနည်း အချိုးအစားအတိုင်း လွယ်ကူစွာ ဖေါ်စပ်ရန် ဖြစ်လေသည်။ ဆေးနည်း (၁) ဆီးဖြူးသီးကို ထုထောင်းပြီး အစေ့ဖယ်၊ နေလှန်း၊ အမှုန့်ပြုလုပ်ရန်။ (၂) ကြိတ်မှန်ရွက်ကိုခူး အရိပ်မှာ အလိုအလျောက် သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံ အမှုန့်ပြုရန်။ (၃) ကွမ်းရွက်ကို အခြောက်လှန်း အမှုန့်ပြုရန်။ (၄) ပျားရည်စစ်စစ်ထို(၄)မျိုးသာ လိုပါသည်။ ယခုခေတ်ကာလ မျက်မှန်ကောင်းတစ်လက်လုပ်ပါမူ ကာလတန်ဖိုး လေးသောင်းငါးသောင်းမကကုန်သည်သာ။ နေရာတကာ မျက်မှန်မပါတော့ စိတ်ပျက်ဖွယ် အကန်းကြီးလိုဖြစ်ပြန်သည်။ မျက်မှန်မေ့ကျန်ပါလျှင် ဘာမှမမြင်ရချင်တော့၊ စာဖတ်ဖို့၊ … Read more
ကိုယ်ဘက်က ဘယ်လောက် ချစ်နေပါစေ.. သူဘက်က တန်ဖိုးမထားရင် အမှိုက်ပဲ….
ဆွမ်းတော်စွန့်ထားသည့် စားသောက်ဖွယ်ရာများကို စားသင့် မသင့်….
ဆြြမ္းေတာ္ တင္ လွဴဒါန္းျပီးမွစားေသာက္သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ မည္က့ဲသို႔ အက်ိဳးရရွိ ပါသလဲ (ေမး) အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တု႔ိ မိသားစုသည္ ေန႔စဥ္ ထမင္းဟင္းႏွင့္ ရလာသမွ်ေသာ ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္တို ႔ကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ဆြမ္းေတာ္တင္ျပီးမွ စြန္႔သည့္အခါ စားေသာက္ခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာပင္ရွိပါျပီ။ ဗုဒၶေ၀ယ်ာ၀စၥ ျပဳၾကသူမ်ားမွာ ဇနီးႏွွင့္သမီးမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၍ က်န္လူမ်ား အျပစ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ မ်ားစြာတုန္လႈပ္မိပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ရသည္ကုိ၄င္း၊ ထုိအျပစ္မ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို၄င္း၊ ရွင္းလင္းညႊန္ၾကားေပးပါဘုရား။ ( ေျဖ ) ရာဇ၀င္တြင္ ပုဂံျပည္ အေနာ္ရထာမင္းက မႏူဟာမင္းအား ဘုန္းကံနိမ့္ေစရန္ သင္ပုတ္ပလႅင္တြင္ စြန္႔ျပီးေသာ ဆြမ္းေတာ္တင္ကုိမေနာလင္ပန္း၌ထည့္၍ ေကၽြးသည္ဟူေသာ စကားမွစ၍ ဆြမ္းေတာ္တင္ စားလွ်င္ ဘုန္းကံနိမ့္္သည္ဟု ေျပာစဥ္ ျဖစ္ေနရပါသည္။ ေ၀ယ်ာ၀စၥလုုပ္သူ ဆြမ္းေတာ္တင္ စားေကာင္းသည္ … Read more